यी हुन पाइलटले यात्रुलाई कहिल्यै नभन्ने ६ कुराहरु । जहाजमा फोन अफ गर्नुको खास कारण के हो ? — Riddle Nepal
यी हुन पाइलटले यात्रुलाई कहिल्यै नभन्ने ६ कुराहरु । जहाजमा फोन अफ गर्नुको खास कारण के हो ?
विमानमा यात्रा गर्दा कुरा केही यस्ता कुरा हुन्छन् जो पाइलट यात्रुलाई कहिल्यै बताउँदैनन्। जब तपाई विमानमा सवार हुनुहुन्छ, पाइलट तथा फ्लाइट अटेन्डेन्ट केही जानकारी दिने गर्छन्, तर सोझै सबै कुरा भने बताउँदैनन्। यसको एक कारण हो, यात्रुको बिच डर नफैलियोस् र गलत कदम नचालुन्। विमानमा सवार हुँदा पाइलटले यात्रुसंग लुकाउने केही कुरा यहाँ चर्चा गरिएको छ।plane cabin pilot 416716
जहाजमा फोन अफ गर्नुको खास कारण त यस्तो पो रहेछ, सधैं फोन अफ गर्नुहोस नत्र यस्तो हुन सक्छ
एक यात्रु अनुभव सुनाउँछन् -‘म एक पटक बेलायतको हिथ्रो विमानस्थलबाट विमानमा चढेको बेला फोन अफ गर्ने आग्रह गरियो तर मैले उनीहरुलाई झुक्क्यार खल्तीमा आइफोन राखें अफ नगरी ।
मैले गलत गरेको कुरा अहिले खोल्दैछु । मलाई मेरो काम सम्बन्धि महत्वपूर्व सन्देश हेरिरहनु पर्ने भएकाले मैले फोन अफ गरिन तर उनीहरुले चाल पाएनन् । अनि मलाई के थाहा थियो भने एक फोनले उडिरहेको विमानलाई दुर्घटना गराउने वा जमिनमा पछारिने अवस्थामा पुर्‍याउन सक्दैन ।’